ASP RSS Parser, Nri RSS | Martech Zone
Amalitere m site na ide ederede nke m na ASP site na iji ihe MSXML. Enwere m ike ịkọwa ihe dị ka 75% nke faili RSS na-eme nke a, mana ụfọdụ nkọwapụta XML rụrụ arụ na ndepụta RSS gosipụtara na ọ siri ike mmemme. Ga-ahụ ya n’ọrụ Ebe a. Nwere ike ịgafe ọnụọgụgụ ihe kachasị (ni), ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụedemede ebipụ na okwu (nc), yana URL ahụ. Nwekwara ike ịhụ nri n'ezie site na iji mgbanwe debug Ebe a.
Ọtụtụ faili ntanetịime RSS dị ezigbo 'unyi' ma chọọ ịtụgharị ederede na faịlụ XML na koodu ntinye eriri (ugh!). N'ezie, anyị ka nọ na RSS 'ntorobịa' anyị na net ka ọ tụghị m n'anya. Gụkwuo gbasara nkọwa RSS Ebe a.
N'ikpeazụ, ahụrụ m obere mkpuru. Achọtara m klas ASP n'efu iji budata. Ọ dị ntakịrị nwayọ, mana ahụbeghị m ndepụta nke ọ na-enweghị ike ịgụ. Enwere m ụdịdị ebe a na ụdị dị ike ebe a.
Otu di na nwunye na-ede ihe ederede. Achọrọ m ikpochapụ ụfọdụ mkpado HTML na nkọwa laghachiri. Emere m ya na obere ọrụ nhicha m hụrụ:
Ọrụ Wepu HTML (strText) Dim nPos1 Dim nPos2 nPos1 = InStr (strText, ">") Mee Mgbe nPos1> 0 nPos2 = InStr (nPos1 + 1, strText, ">") Ọ bụrụ nPos2> 0 Mgbe ahụ strText = Aka ekpe (strTeP, - 1) & Mid (strText, nPos1 + 2) Ọpụpụ Ọpụpụ Ọ bụrụ na nPos1 = InStr (strText, ">") Loop Remove HTML = strText End Function
M gbakwunyere obere koodu dị mma: Mgbe ụfọdụ, enwere m ike igosipụta nkọwa ma ọ bụ obere karịa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na m belata ọnụ ọgụgụ mkpụrụ edemede, mgbe ahụ enwere m ike ịkwụsị nkọwa ahụ n'etiti okwu ahụ. Achọghị m ime na!
Function Cutoff (strText, intChars) dim intLength dim j intLength = len (strText) ma ọ bụrụ na intChars> intLength mgbe ahụ maka j = intChars ka 0 zoo -1 ma ọ bụrụ na etiti (strText, j, 1) = "" wee pụọ maka ọzọ ma ọ bụrụ j> 0 mgbe ahụ strText = ekpe (strText, j-1) & "..." ọzọ strText = strText ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na Cutoff = strText End Function
(Enwere m nsogbu ụfọdụ na igosipụta koodu m n'ụzọ ziri ezi na ntinye a… mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na otu n'ime ọrụ ndị a!)
Achọpụtala m ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na net. Enwere
Na mmechi, enwere m olile anya na nkọwapụta RSS na-aga n’ihu na-anụcha na ntanetịime ntanetị na-agbaso ụkpụrụ XML n'ọnọdụ niile. Free ngwa dị ka TypePad, WordPress, wdg mkpa nụchaa ha RSS arụmọrụ. Blọọgụ ndị ọzọ dị ka MySpace, Xanga, LiveJournal, wdg.kwesịrị iji melite arụmọrụ RSS ha. RSS dị ike…Chris Baggott dere ederede mara mma na Email vs. RSS. Echere m na ijikọta ọrụ ha nwere ike ime ka mmetụta nke ha abụọ dịkwuo elu!
Tags: aspIkwu okwuRSSrss nyocha